ဇြန္လ 23, 2019 - ဖတ်ပြီးသားမိ 8
လူအများစုက ၄ င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကတ်ကြေးများရွေးချယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဆံပင်ကတ်ကြေးရွေးချယ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်မေးခွန်းအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးဖြေကြားပါမယ်။ ဘယ်အရွယ်အစား၊ ဘယ်ပုံစံနဲ့ကိုင်တွယ်လဲ၊ ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်ကတ်ကြေးလဲ။
မူလတန်း VS ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေး
ဒီနေရာမှာအတိုချုပ်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအားဖြင့်:
ကတ်ကြေးများကိုတိုင်းတာသည် လက်မထဲမှာ အရွယ်အစားရွေးရန်ဓါး၏အစွန်အဖျားမှလက်ကိုင်အဆုံးအထိတိုင်းတာသည်။
ယင်းကိုရွေးချယ်ပါ စုံလင်သောအရွယ်အစား သင်၏လက်ချောင်းများနှင့်လက်ဖဝါးများကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
ဆံပင်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်သည် ၆.၅ လက်မနှင့် ၇ လက်မ ဖြီးကျော်နှင့်အခြားများအတွက်ကတ်ကြေး (ရှည်လျားဓါးသွား) ဆံနည်းစနစ်
ဆံပင်ညှပ်သမားများပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်ပါ 5.5 "နှင့် 6" လက်မ ကဖုံးလွှမ်းအဖြစ်ကတ်ကြေး ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းများ၏ 80%
အော့ဖ်လပ်လက်ကိုင်စတိုင်များ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို ergonomic ။ offset လက်ကိုင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဖြတ်တောက်စဉ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဂျပန် 440C, VG10 နှင့်ဂျာမန်သံမဏိ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်အတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိသည်သင်၏ဓါးများကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်: 2021 အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များ!
သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောဆံပင်ကတ်ကြေးအရွယ်အစားကိုရှာဖွေပါ။ ၄.၅″ နှင့် ၅.၅ in အကွာအဝေးရှိတစ်နေရာရာတွင် ပို၍ ကျိုးနွံစွာတိုင်းတာထားသောကတ်ကြေးများကိုဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျစွာပုံဖော်သည်။ ပိုမိုရှည်လျားသောကတ်ကြေးများဖြစ်သည့် 4.5 more ထက်ပိုသောများသည်နည်းဗျူဟာများအတွက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကတ်ကြေး၊ point ဖြတ်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းစနစ်များကိုကတ်ကြေးအသုံးပြုခြင်း။
မည်သို့ရွေးချယ်ဖို့ ဆံပင်ကတ်ကြေး သင်သည်အသစ်ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ရာတွင်ဝါရင့်ဖြစ်စေ၊
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ အဆိုပါဓါးသွားဆံပင် strands ဖြတ်တောက်ဘို့perfectlyုံ angled နေကြသည်။
ကတ်ကြေးလက်ကိုင်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက် ergonomically ပုံစံပြုထားသည်။
The Browse ဤနေရာတွင်ထိပ်ဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု။
အုပ်စိုးရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတစ်စုံကိုရယူပါ
သင်၏ဘယ်ဘက်လက်ကိုဖွင့ ်၍ ၎င်းကိုသင်၏လက်ဖဝါးပေါ်တွင်တင်ထားပါ
လက်ချောင်းထိပ်အဆုံးတွင်ဓါး (သို့) အုပ်သောအစွန်အဖျားကိုထားပါ
အကယ်၍ မင်းလက်ချောင်းသည်သင့်လက်ချောင်းကိုဖုံးအုပ်ပြီးရလဒ်မှာ ၂ ဖြစ်သည်။ "ဥပမာလက်မလက်မဖြစ်လျှင် ၅ လက်မ" ကတ်ကြေးသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်ပေမည်။
5 "ကတ်ကြေးက 2" မှ3"လက်မနှင့်အပြည့်အဝကတ်ကြေး၏အရှည်,5ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟုအဆိုပါဓါးဖြစ်နိုင်သည် XNUMX "ကိုဆိုလိုသည်။
အကယ်၍ မင်းမှာမိန်းမများရှိပါကအမျိုးသမီးများအတွက် ၅ "မှ ၅.၅" လုံလောက်သင့်သည်။
သင့်မှာပိုကြီးတဲ့လက်တွေရှိရင်ယောက်ျားတွေအတွက် ၆ ကနေ ၆.၅ အထိရှိမယ်။ ဒါဟာလုံလောက်ဖြစ်သင့်သည်။
ယခုသင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုကတ်ကြေးများနှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါစို့။ ဥပမာ - အပေါ်ယံလွှာ၊ ပွတ်တိုက်နှင့်ဖြောင့်ဖြောင့် (ဂန္ထဝင်)၊ အော့ဖ်စက် (semi-offset နှင့် full offset) နှင့် crane offset လက်ကိုင်များ။
အဆိုပါဂန္ထဝင် လက်ကိုင်: အပေါ်နှင့်အောက်ပိုင်းဓါးသွားများသည်ဤဂန္ထဝင်လက်ကိုင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ အပေါ်ဘက်ရှိကွင်းများနှင့်ကွင်းကွင်းများကိုမည်သို့တွေ့နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအလွန်ဘုံများနှင့်တစ် ဦး ထက်ပိုသောရိုးရာကတ်ကြေးပုံစံ။
Offset လက်ကိုင်: Offset နှင့် Semi-offset လက်ကိုင်များမှာများသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပြီးလက်စွပ်တို။ လက်ကိုင်လက်စွပ်တိုသောကြောင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများသည်သင်၏လက်ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာအနေအထားတွင်ထားစေသည်။
အဆိုပါ Crane Offset လက်ကိုင်: အ Crane offset လက်ကိုင်ကတ်ကြေးများသည်အမြင့်ဆုံးထောင့်ပုံဖြစ်ပြီး၊ အပေါ်ကဓါးသည်အပေါ်ကပုံတွင်လုံးဝဖြောင့်နေသည်၊ လက်ကိုင်သန့်နှင့်လက်ကွင်းများကိုသိသိသာသာအောက်သို့ကျစွာမြင်တွေ့ရသည်။ ဤအကရိန်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်ယနေ့သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ဆံပင်လုပ်ငန်းများတွင်အဆင်ပြေလွယ်ဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအရအဆင်ပြေဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အကြောင်းပို Read ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားများ!
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်သင်အလှပြင်ဆိုင်၌သင်ဖြတ်ထားသောပုံစံနှင့်ပုံစံကိုတိုက်ရိုက်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ လက်ျာဘက်ကတ်ကြေးတစ်စုံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မှာအရေးကြီးနိုင်သည်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောကတ်ကြေးများသည်ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းကိုပေးသောကြောင့်ညှပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဓါးကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
သင်တို့အဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင်အစပြုသူကတ်ကြေးကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်ဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်လေ့ကျင့်ရန်အတွက်ဆံပင်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးရိုးရှင်းသောဖြောင့်သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုဖန်တီးလေ့ရှိသောကြောင့်ချွန်ထက်သောကတ်ကြေးများ (micro serrated scissors) ကိုရှာဖွေပါ။ ဤဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုဖြတ်ခြင်း (ဖြတ်ခြင်း) သို့မဟုတ်ခုတ်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုပါ။
သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းရှာနေလျှင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံညှပ် ဆံပင်ကတ်ကြေးများအနေဖြင့် Convex အနားသတ်ဓါးများသည်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အချပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ခုတ်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအချောမွေ့ဆုံးနှင့်အပြောင်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောစတီးမာမာမာမာသောသံမဏိလိုအပ်သည်မှာဂျပန်သံမဏိ၏အရည်အသွေးသည်သာလွန်သည်။
အကြောင်းပိုမို Read ဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ကတ်ကြေး & Edges!
ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများကိုကိုင်ထားလျှင်ဒေါင်လိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် (ဒေါင်လိုက်)မျဥ်းဖြောင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းထို့နောက်ကတ်ကြေးများကိုလုံးဝဒေါင်လိုက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်ကတ်ကြေး offset သင့်လက်ကိုဖြတ်တောက်နေစဉ်သဘာဝနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်အနေအထားတွင်ထားရှိရန်သူတို့၏ထောင့်နှင့်စွမ်းရည်ကြောင့်အကြံပြုထားပါသည်။
ဘို့တုံးဖြတ်တောက်ခြင်း (Bobs နှင့်အရှည်တစ်ခု) ထို့နောက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လည်ပင်းတွင်အပြားပြားထိုင်ရန်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးလိုအပ်သည်။ သင်၏လက်နှင့်လက်ချောင်းများကိုနေရာချရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လက်ချောင်းများကိုဖြတ်တောက်နေစဉ်အတားအဆီးမဖြစ်စေပါ။ ဤတုံးနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်စတိုင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်ရိန်းစတိုင်အပြည့်အဝ offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး။
အခုနက်ရှိုင်းသောပွိုင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း စတိုင်လ်၊ ကတ်ကြေးများကိုဖြောင့်ရန်သင်၏တံတောင်ဆစ်ကိုမြင့်မားစွာကိုင်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဂန္ထဝင်ဖြောင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏ဤပုံစံအတွက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သည်ဖြီးကျော်ကတ်ကြေး ဆံပင်ညှပ်များနှင့်ဆံပင်ညှပ်များတွင်တွေ့ရသည့်ဖြတ်တောက်ခြင်းပုံစံကို ၆ လက်မ၊ ၆.၅ လက်မနှင့် ၇ လက်မပတ်လည်ရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုဖြောင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ် offset ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒီ6လက်မပိုရှည်အရွယ်အစားဆံညှပ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၏ဖြီးစတိုင်ကျော်အကောင်းဆုံးဘို့ခွင့်ပြုပါ။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း!
သို့သော်ဖြေရန်ခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွမ်းကျင်သူများသည်သူတို့၏ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုမည်မျှအကြိမ်မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ဓါးအမျိုးအစား (ခုံးသို့မဟုတ် bevel edge scissors) သည်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်ရန်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုလဲပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်။
အကြောင်းပိုမို Read အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးပေးမှုဝန်ဆောင်မှုများ!
ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအရှည်သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းနည်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဆံပင်ညှပ်သောနည်းစနစ်အများစုသည်အရှည် ၅.၅ လက်မသို့မဟုတ် ၆ လက်မရှိကတ်ကြေးများလိုအပ်သည်။
Over The Comb ကဲ့သို့သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းသည် ၆.၅ လက်မမှ ၇ လက်မကြားဆံပင်ညှပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာသည် ၆ လက်မအရှည်ရှိသောဆံပင်ကတ်ကြေးများသာလိုအပ်သည်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆံပင်ညှပ်နည်းစနစ်တိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးအရှည်သည် ၆ လက်မဖြစ်သည်။
ကျောက်တံတား ဂျပန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Offset ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောအစု
Yasaka Offset Handle ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းညှပ် (၅.၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မ)
Ichiro Offset ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသတ်မှတ်ထားသော ၆ လက်မအရွယ်အစား
Yasaka ၇ လက်မရှိသောဂျပန်ဆံပင်ညှပ်
Mina Sakura 7” လက်မဘာဘာကတ်ကြေး
Ichiro K10 ဆံပင်ညှပ်နှင့်ဆံပင်ညှပ် 7”
Pre Style Ergo ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအစု
Mina Matte က Black Offset ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ထားသည်
Mina Sakura ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် Thinning အစုံ
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်အချိန်ယူရသည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့မှသာသင်သည်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုများကိုရရှိနိုင်ပြီးထိုအလွန်မြတ်သောအနားများကိုကြာရှည်စွာထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Professional Shears များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မူလအဆင့်ကတ်ကြေးများ
Japan Scissors မှာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးအသစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးပြည့်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များစုစည်းခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။ကျောက်တံတား,Jaguar,Yasakaနှင့်Mina.
သင့်လျော်သောစတိုင်၊ အရွယ်အစား၊ အရည်အသွေးနှင့် ergonomics များရှိမှန်ကန်သောကတ်ကြေးများကိုရှာဖွေခြင်း၏အရေးကြီးမှုသည်သင်၏ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုနောက်အဆင့်တစ်ခုအတွင်းသို့ရောက်ရှိစေလိမ့်မည်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းလုပ်ငန်း.
အထက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်းသင်သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄.၅ လက်မမှ ၇ လက်မအမြင့်အထိရှိသော်လည်းမကြာသေးမီက ၅.၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မကတ်ကြေးများသည်ပိုမိုများပြားပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားနှင့်ဆံ။
၄.၅ လက်မမှ ၅.၅ လက်မအရွယ်ကတ်ကြေးများသည်ပိုမိုတိကျပြီးဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်သည့်အခါတိကျသောပုံသဏ္createာန်ရှိသည်။
၆ လက်မမှ ၇ လက်မရှည်သောဆံပင်ကတ်ကြေးများကိုဖြီးနည်းစနစ်များနှင့်ရိုးရှင်းသောချုံ့ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်(ဆံ) ကတ်ကြေးဆံများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။
သင်၏စတိုင်နှင့်သင့်လက်အရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးအရွယ်အစားကိုရှာဖွေသောအခါသင့်လက်ချောင်းကိုဆန့ ်၍ ဓါးသွားကိုစစ်ဆေး။ သင့်လက်ဖဝါးနှင့်စုစုပေါင်းအရှည်ကိုကြည့်ပါ။
၄.၅ လက်မမှ ၈ လက်မအကြားရှိကတ်ကြေးများသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်များစွာအတွက်သင့်လျော်သည်။
အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးကပ်နှင့်အိတ် ၁၀ ခု
ဧပြီလ 13, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 9
ဧပြီလ 07, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 5
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကဒ် USA - City by City Guide
ဧပြီလ 07, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 8